बीमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ ? यी सुत्र अप्नाउनुस सफलता तपाईकै साथमा छ « Arthabazar.com
बीमा अभिकर्ता हुनुहुन्छ ? यी सुत्र अप्नाउनुस सफलता तपाईकै साथमा छ
प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७७, शनिबार २०:५५
बीमा अभिकर्ता भनेका बीमा कम्पनीका मेरुदण्ड हुन् । जीवन बीमा व्यवसायमा बीमा अभिकर्ता नै अग्रिम पंक्तिमा उपस्थित हुन्छन् । अग्रपंक्तिमा सर्वसाधारणलाई बीमाको आवश्यकता र महत्वको विषयमा जानकारी गराउने व्यक्ति बीमा अभिकर्ता हुन् ।
बीमा अभिकर्ताले पनि प्रचलित ऐेन कानुनबमोजिम आय–आर्जन गर्दछन् । बीमा गर्न चाहने व्यक्तिको आयस्रोत, उद्देश्य, आचरण, बचत गर्ने क्षमता, आर्थिक भार आदिको मूल्याङ्कन गरी बीमा आभिकर्ताले ग्राहकसमक्ष बीमा योजनाको बारेमा स्पष्ट पार्दछन् । यसैअनुसार बीमा कम्पनीको बीमा लेख बिक्री हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमको सहयोगमा यो सामाग्री तयार पारिएको हो